Madaxwweyne Farmaajo oo xafiiskiisa ku qaabilay xoghayaha arrimaha dibadda Britain – fogaanarag
Madaxwweyne Farmaajo oo xafiiskiisa ku qaabilay xoghayaha arrimaha dibadda Britain
Muqdisho, 15 ka Maarso, 2017)- Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaaajo ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay Xog-hayaha Arrimaha Dibadda dowladda Britain Mudane Boris Johnson oo maanta booqasho gaaban ku soo gaaraay magaalada Muqdisho.
Madaxweynaha iyo Xoghayaha Arrimaha Dibadda Dowladda Britain ayaa ka wada hadlay arrimo ay ka mid yihiin xoojinta xirriirka dowladaha Soomaaliya iyo Britain, gurmadka abaaraha, taabogelinta hay’adaha ammaanka , maalgashiga iyo sidii dowladda Britain ay u ballaarin lahayd taageerada ay ku bixiso Soomaaliya.
Xoghayaha Britain Mudane Boris Jonhson ayaa sheegay in dowladdiisa ay soo dedejin doonto 110 Milyan oo Gini oo ay ugu deeqday gurmadka abaaraha. Waxaa kale oo uu sheegay in Britain ay kordhineyso taageerada dhanka mashaariicda horumarinta.
Ugu dambeyntii, Madaxweynaha iyo Xoghayaha ayaa ka wada hadlay diyaargarowga shirka loo ballansanyahay inuu ka dhaco London 11ka bisha May, oo ay qabanqaabadiisu mareyso meel aad u wanaagsan.